Shaqaalaha qaaliga ah ee ka qaybgale
Shaqaalaha qaaliga ah ee ka qaybgale,
Haddii qof ii sheegi lahaa Janaayo 2020 in masiibadadu ay sii wadi doonto inay carqaladayso nolosheena in ka badan laba sano, maan rumaysteen iyaga. Waxaan garwaaqsaday in qaar badan oo naga mid ah ay aad uga niyad jabeen masiibada maadaama ay diiday inay dhammayso. Waxaa intaa dheer, waa inaan, wakhti iyo wakhti mar kale, ururinnaa xooggeena si aan u sii wadno hawlgaladayada xaaladahan adag.
Shaqaalaha ku jira guryaha Attendo waxay maalin kasta u ilaaliyaan dadka deggan siyaabo kala duwan. Waxaa jira tilmaamo iyo xeerar badan oo adag oo adiga ku khuseeya, waxayna hadda ku jiraan xeerka tallaalka coronavirus ee daryeelka bulshada iyo shaqaalaha daryeelka caafimaadka. Oo waxaan hubaa inaan dhammaanteen dooneyno inaan isticmaalno maalin kasta waji-xidhka gadaasheeda.
Dadka ka shaqeeya hawlaha adeegga hadda waxay ka shaqeeyaan guryahooda. Qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa keligood nool, taas oo macnaheedu yahay in is dhexgalka bini'aadmigu uu ku koobnaan karo socodka aan dhammaadka lahayn ee shirarka kooxaha. Ama waxay ku hareeraysan yihiin xubnaha qoyskooda oo ku mashquulsan hawlahooda gaarka ah, taas oo markaa jawiga shaqadu aanu ahayn mid nabdoon.
Waxaan rabaa inaan si gaar ah kugu mahadceliyo iyo dhammaantiin si wadajir ah. Si wanaagsan ayaad u wada shaqeysay, inkastoo ay jiraan xaalado aan caadi ahayn. Runtii aad baan uga mahadcelinayaa dadaalka aad ku bixisay shaqadaada.
Mid kasta oo inaga mid ah waxa uu muujin karaa naxariistiisa iyo taageeradiisa isagoo hal ilbidhiqsi u joojinaya saaxiibkiis. Weydii shaqaalaha kale sida ay yihiin oo dhegayso waxay ku dhahayaan. Waxaan rajeynayaa inaad dhammaantiin sii wadi doontaan inaad la wadaagto waqtiyada farxadda leh ee nolol maalmeedkaaga Atso, iyadoo dhammaan shaqaalaha Attendo ee Finland ay arki karaan sida ay muhiimka u yihiin kulanka dadka. Aad baan ugu farxay markaan arkay in xataa cudurka faafa, aad qalbiyadiinna geliseen shaqadiinna. Anaga hadaan nahay kooxda maamulka Attendo waxaan sameyneynaa wax walba oo aan awoodno si aan u hubinno in nolol maalmeedka dhammaan guryaha Attendo ay ahaan doonto sida ugu fudud ee suurtogalka ah.
Si aad u qeexdo ereyada wanaagsan ee heesta Samuli Putro ee "Älkää unohtako toisianne" ("midba midka kale yuu iloobin"):
Sida noloshu u janjeerto inay dib isu soo celiso, waxaad u baahan tahay inaad hesho waxyaabo ka reeban
"Mahadsanid" ayaa la yidhi wakhtigan xaadirka ah waxa laga yaabaa inay soo baxdo muddo bilo ah
Markaad jilicsan tahay, waxaad tahay dhagax weyn
Ku kalsoonow in noloshu ay halkaas kuugu jiri doonto; ku raaxayso safarka la wadaago
Midkiinba midka kale yuu ilaawin
Aynu xasuusanno fariinta erayadan. Waxaa jira iftiin dhamaadka cudurkan faafa ee aafada ah.
Tixgalin naxariis leh,